Soo dejisan FBReader 0.12.10 – Windows – Vessoft
Bogga rasmiga ah: FBReader
FBReader – software ah ay ku akhristaan ​​buugaag elektaroonik ah oo files ka archive ah qaabab kala duwan. FBReader bandhigayaa sanamyada iyo links qoraalka, dhawraa booska hadda ka jirta qoraalka, rogaa bogagga si toos ah, zooms waraaqaha qoraalka iwm software ayaa kuu ogolaanaya in aad ku darto files in aad maktabadda buug gaar ah oo u kala qaybi qorayaasha ama qaybaha kala duwan. FBReader kale oo ku jira qalab ay u astaysto noocyada, indents, xilliyada iyo goobaha kale ee qoraalka. FBReader gubtay, khayraadka nidaamka ugu yar oo uu leeyahay si fudud aad ku isticmaasho interface.
Taageerada ah ee qaabab kala duwan ee waraaqaha qoraalka
Akhriska qoraallo ka archives
Bandhigga ah links kale iyo sanamyo la qoraalka
Abuurista maktabadda buugga
Qaabeynta ah goobaha qoraalka
Faallo ku saabsan FBReader
FBReader Xirfadaha la xiriira